Tsy mahavoky ny abidia - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Efa manomana ny fidiran’ny mpianatra ny ray aman-dreny hatrany amin’ny garabola ka hatramin’ny ireo mamerin-taona fa nibakabaka.
Ao ireo te hianatra ka miantsoantso ndeha hindramina i Nitiah Nosy hilaza ny hetahetan’izy ireo :
Impiry moa izaho ry Dada no naniry ho an-tsekoly !
Novalianao boraingina sy tsy nahoanao akory:
Fa : “ny abidy tsy mahavoky ary koa mandany ny azo,
ho an'ireo manan-katao fa tsy ho antsika mavomavo” !
Te hianatra fa tsy afa-manoatra ! Indrisy
(Ny tononkalo manontolo mitondra ny lohateny “Omeo ny zony…” izay mitaky ny zon’ny ankizy dia mora hitanao ao amin’ny rohy : https://mcmparis.wordpress.com/2017/06/13/omeo-ny-zony-nitiah-nosy-2/
Eny hianatra no faniriana. Mba maro no maniry hianatra amin’izato sekoly raitra ka tsy mampiasa tsaoka intsony rehefa ho any amin’ny solaitrabe (tableau blanc) na koa avy hatrany di a hita eny amin’ny grand écran ny valiny rehefa manao fanazarana. Eny misy izany ka hamporisihana ny fampitomboana isa ireny sekoly ireny. Fa mbola maro no mianatra amin’ny SFF izay naverina ho EPP.
S.F.F (Sekoly Fanabeazana Fototra)
Andrianiko, resahako fa toera-nahasoa,
nahaizanay nanao kajy, sy namaky "a" sy "o".
Namolavola hankamamy ny fiteny Malagasy,
reharehanay hatrany fa nahaizan-taratasy.
Dabilio mihozohozo, solaitrabe tsy dia mazava,
trano eny tsy zarizary sy mienda-tafo lava.
Tsy nampihemotra anay, nihafianay hatrany,
tanjonay ny ho tafita dia nitozo teny ihany.
Sekolin'ny sarambambe, nikolokolo sy nanondrotra,
tokony omena lanja fa fanabeazana ny fototra:
ao ny zaza gasy maro no mandresy ny habadoana,
aza atao an-jorombala fa fanoitram-pandrosoana.
SFF na EPP maro amin’izy ireny no tsy manara-penitra saingy sokajiana ho ara-dalana satria an’ny Fanjakana. Misy ireo sekoly hakatona satria ahiana ho manabe fahavalo hono re na hita izao aza fa mamofono politika ilay fanapahana. Izay izany… Zava-nisy izany ka ambara fa mijanona ho tantara.
Vao mivoaka ny valin’ny fanadinana bakalorea dia hazakazaka hijery voka-panadinana ny lahasan’ireto mpiadina sy ny ray aman-dreny. Fa a o koa ireo mpangarom-paosy fa mitandrema. Isan-taona izao dia misy hatrany no tratra ekena fa tsy hamerin-taona izy ireny fa fay ka hitandrina raha sanatria hamerin-taona.
Mahatsiaro manokana an’ireo tsy maintsy mamerin-taona i Ikaloyna Vony. “Tsy mora tokoa ny tsy afa-panadinana, mila fanohanana ara-tsaina avy amin'ireo manodidina azy ny famerenan-taona. Niniana nasiana tenin-jatovo ao anatiny mba ho latsaka tanteraka ao am-pon'ny mpianatra ny hafatra” hoy izy.
Ekena tsy mora leitsy
ny namerina nandia
iny tokontany iny.
Fa, voadinganao ny fefy.
Izao ireo akama
" torony " * ny lasa,
Ialahy tsy maintsy " tafa ".
Raha hiteny i Neny
hoe aza be lalao
tsy izy no masiaka
Fa, tiany ialahy tafita.
" Siora " leitsy, zandry
dia mametraha fanamby !
(Atolotro ho an'ireo zandry tsy afaka BAC ka hamerin-taona)
Toro : tour
Nivoaka ny valim-panadinana bakalorea dia ao ireo nibitaka fa nahazo izato diplaoma sady lakile hidirana amin’ny fampianarana ambony. Arahabaina izy ireny fa na anjoria na tena fahaizana dia ny vokatra soa mijanona ho doria. Ny tsapa dia mibitaka ireo mpitantana fa tsisy hono ny olana. Kanefa raha mpianatra no tsy mahazo naoty antsasa-manila amin’izay takiana dia sokajiana ho tsy mahay. Fa inona kosa no ilazana ny mpiandraikitra ka tsy afa-panadinana ny antsasa-manilan’ireo mpiadina ? Vendrana koa aho mametraka izany fanontaniana izany. Matoa tsy alana ireo minisitra dia nahatratra ny tanjona nokendreny izy ireo. Mazava angamba izany.
Ao koa ireo nandamoaka noho ny antony tsy fantatra na fantatra fa odiana tsy hay. Hazakazaka hafa indray koa ny hitady ny sekoly hanohizana ny dia. Hijanona eto sa hiampita ? Mbola lavitr’ezaka ny tolona. Aza kivy mahereza.
Misy ireo lasa lavitra any ivelany any no nanohy fianarana. Ao ireo mahavita soa ny fianarana dia manontany tena manao hoe :
Gasikara « afobe »
Kely sisa dia hifarana
niaretana ny mafy
taona maro aty andafy.
hafaliana sy tomany
heverina hampandroso ny tanàna.
Ka hikasa hiverina amin’izay
handeha hody any aminay.
Saingy, … toa misalasala indray.
Tena sadaikatra ankehitriny
sanatria ve ho azon-tsiny
na koa hoe ho voan’ny tody
satria tsy mazoto tampoka ny hody.
Fa nahoana hoy ianao manontany
Raha mahita an-gazety
sy amin’ny internet
ireo zavatra tsy mety
Dia aleo tsorina sy ambara
fa tena mahalasa saina
ny mihaino ireo taraina
sy mahita sary marobe.
Moa va tsy efa « afobe »?
Vono olona sy dahalo
vaky fasana sy trano
tsy tantara na angano
fa dia izay no zava-misy
na zandary na polisy
toa mivadika ho milisy.
Ankoatra ny takalon’aina
sy ny any Atsimo karakaina
dia tanàna maro koa voasazy
Loza hatrany no mba re
heno etsy sy eroa
isaky ny minisitera
resabe hoe misy afera
Fa vao mainka fahagagana
tsy misy intsony fitsarana
fa ny vahoaka no Mpitsara
ireo miseho misary adala,
ka avy hatrany dia mamono
sy mandoro manatono.
Ka mahatonga ahy hilaza hoe:
Ka raha hody aho androany
Inona no hanjo ahy any?
Moa ve aho hahita asa?
Hahavita hanangana Orinasa?
Moa hisy zavatra atao?
Sao hipetra-potsiny ao?
Moa ve aho mbola ho tamàna
nefa hono ilay tanàna
tena lasa ratsy be
Ratsy Laza ianao ry fireneko
vokatry ny aterineto
satria dia zava-doza hatrany
no aparitaka eran-tany.
Izao ny ankizy tsy mety mody
Fa toy ny azom-panafody.
Hijanona any elabe
Fa tsy hody any amin’ny « afobe »
Ny adin-tsaina tahaka izao voalaza teo izao zary manamarina ny voalazan’i Nitiah Nosy tany ampiandohana izay manao hoe :
“ny abidy tsy mahavoky ary koa mandany ny azo,
Hisokatra indray ny taom-pianarana iray vaovao. Mety misalasala ianao mahita ny voka-dratsy etsy sy eroa. Tsarovy fa ny mahay tsy ambakaina. Mbola Nitiah Nosy ihany no milaza ao amin’ilay tononkalony “Herezo razandry!” fa
Ka esory ny laina fa hisy fotoana,
handrombahantsika an'ilay diplaoma!
Ho reharehan'Ikaky s'ilay Reny tiana,
ary hasoavintsika ny akany niaviana!
Asiana fianarana eny an-tanana,
ny habadoana tsy maintsy hialana!
Ho akaiky sekoly amin’izay ny kilonga,
ka sady hahay no ho dongadonga!!
Nalaza ny hiran’i Odéam Rakoto nanao hoe :
Rankizy malagasy ô!
Mianara taratasy, vonjeo ny lakilasy
Fa fahiny izany
Navadiky ny ankehitriny hoe
Ry Vahoaka Malagasy ô,
Izay mahay mibizina no basy
Aza milasilasy ilaozy ny lakilasy
Vita tompoko ny tafan-dRatalata.
Fanabeazana Katolika : Fiaingana vaovao ho an'ny Fanabeazana katolika - il y a 23 jours
Fampianarana ambony UCM : Ho lanja miakatra ny taom-pianarana vaovao - il y a 1 moi